I-Extensions ye-Hair Virgin e-Peruvian Correct Straight - Soie Hair Atlanta I-Extensions ye-Hair Virgin e-Peruvian Correct Straight - Soie Hair Atlanta
Izandiso zeeNwele zoLuntu zePergia eziLungileyo ze-Peruvian - I-Soie Hair Atlanta - I-Soie Virgin Hair Extensions
Izinwele ze-Organic, ezingaguqukanga ze-VIRGIN. Izandiso zethu zeenwele eziqhelekileyo zasePeru ziyizona zandiso ezide zenziwe zivela kwiincwele ezona zibalaseleyo. Ezi zandiso zineengqungquthela kunye nemibala kakuhle, ehlala kwii-2 iminyaka ngokunyamekela.
yethu I-Peruvian iqonde ngokunyuka kweenwele zabantu zithengwa ngokuthe ngqo ukusuka e-Indiya kwaye zixutywe ngokufana kwazo neenwele zasePeruvia. I-strand ngayinye iyinkophelo kunanoma yimuphi uhlobo lweenwele olongeza ubungakanani kunoma yimuphi umzobo kodwa lugxininisa kakuhle ngazo zonke iintlobo zeenwele. Zonke iimveliso zethu zivunwa kwiimeko zabo zendalo kwaye isiqalo ngasinye sivela kubaxhasi be-1-2 ukuqinisekisa ukuhambelana.
Ukusebenza ngokuphindwe kabini ukukhawulela iinwele ezithwayo